Waddo Sharci Ah Ma Loo Maray Xil ka Qaadista Khayre? | Gaaroodi News
Waddo Sharci Ah Ma Loo Maray Xil ka Qaadista Khayre?
July 26, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa sheegay in xilka laga qaaday loo maray waddo aan sharciga waafaqsanayn, isla markaana hareermarsan dastuurka dalka.
Khayre oo muuqaal soo dhigay bartiisa Facebook-ga ayaa sheegay in wixii ka dhacay Golaha Shacabka ay aheyd sharci-darro isla markaana aan loo marin hab-raaca saxda ah ee xil ka qaadista xukuumadda.
Gudoomiyaha golaha shacabka ee barlamaanka federaalka Maxamad Mursal Sheekh Cabdiraaxmaan ayaa sheegay in goluhu codka kalsoonida ah kala noqday xukuumadda uu hogaamiyo Xasan Cali Kheyre isagoo ugu baaqay madaxweynaha inuu soo magacaabo ra’isul wasaare cusub.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in cod la qaaday kadib 170 xildhibaan ay u codeeyeen in kalsoonida lagala laabto xukuumadda halka ay diideen 8 xildhibaan.
Balse Khayre ayaa ku adkaystay in xil ka qaadistiisa aysan xitaa ku jirin ajandihii kulanka Golaha Shacabka balse uu hadda qaatay in uu iscasilo isaga oo sida uu sheegay u turaya dalka isla markaana aan dib loogu laaban burbur iyo dhibaato.
“Aniga oo og in waxii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci-darro, aan loona marin hab-raacii saxda ahaa ee xil ka qaadis xukuumadeed, aniga oo og in aanay ku jirin ajendaha, aniga oo og in aan laga doodin, aniga oo og inaan loo codeyn, aniga oo og in aanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka, haddana waxaan go’aansaday inaan anigu ummadda Soomaaliyeed u noqdo tusaale oo aan iska casilo xilka aan ummadda Soomaaliyeed u hayay,” ayuu yiri mudane Khayre.Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, ayaa sheegay in xilka laga qaaday loo maray waddo aan sharciga waafaqsanayn, isla markaana hareermarsan dastuurka dalka.
Xildhibaano ka tirsan golaha wasiiradda oo joogay fadhiga barlamaanka ayaa diiday dooda kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyagoo ku tilmaamay go’aanka ridista xukuumadda mid ka timid guddoonka oo kaliya isla markaana aan sharciyad haysan. Wasiirka amniga dowlada fedaraalka Maxamed Abuukar Islow
Doodda xildhibaannada diidan
Qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo horjeeday ayaa waxay ku tilmaameen in kalsooni kala noqoshada dhacday ay ahayd mid sharci darro ah.
Wasiirka amniga dowlada fedaraalka Maxamed Abuukar Islow oo ah xubin ka tirsan golaha shacabka ayaa sheegay in wixii baarlamaanka ka dhacay aysan sharci ahayn.
” Wax diiday iyo wax dooday midna ma laha, wax hadlay ma laha, waa dhacday xukumaddii uun buu yiri , wax cod loo qaaday ma laha waa sharci darro, ” ayuu yiri Mr Islow.
Doodda xildhibaanada taageersan
Qaar ka mid ah xildhibaanada taageersan kalsooni kala noqosahda xukuumada Khayre ayaa waxay ku doodeen in waddada saxda ah loo maray arrintani.
Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamuud cabdiraxmaan Beene oo sheegay in qaar ka mid ah wasiirada ay hor istaageen in laga doodo kalsooni kala noqoshada xukuumada.
” Doodda way furneyd maanta laakiin wasiiradii ku hadlayay codka rai’sul wasaaraha ayaa fowdo kiciyay oo diiday, ” ayuu yiri Beene.
Waxaa uu intaa ku daray in la sii ogaa arrinta kalsooni kala noqoshada xukuumadda.
” Gudoomiyaha wuu ku dhawaaqay waana la ogaa, baarlamaanka wuu buuxay, tirada cidda muran galinaysa waa cid iska indah tiraysa xaqiiqada, ” ayuu intaa ku daray. Xasan Cali Kheyre
Waddo shaci ah ma loo maray?
Abukaate Cali Maxamed Ciid ayaa sheegay in xildhibaanada ay shaqadooda ka mid tahay ansixinta xukuumada iyo kalsooni kala noqshada labada.
” Howlaha baarlamaanka fedaraalka Soomaaliya ayay ka mid tahay iyo awoodihiisa in rai’sul wasaare ay ansixiyaan oo shaqo siiyaan iyo in ay ka qaadaan oo ay kalsoonida kala laabtaan, taasi wax lala yaabo ma aha, ” ayuu yiri Abukaate Cali.
Balse waxaa uu sidoo kale sheegay in kalsooni siinta iyo kala laabashada labadaba ay leeyihiin waddo sharci ah oo loo maro.
Garyaqaanka ayaa xusay in marka xukuumad kalsoonida lagala noqonayo ay tahay in mooshin laga keeno.
” Mooshin ayaa laga keeni karaa habab kala duwan ayay ku imaan kartaa in baarlamaanka uu shaqada golaha wasiirada ay hayaan uu faragaliyo, ” ayuu yiri .
Abukaate Cali Maxamed Ciid ayaa sidoo kale sheegay in marka xukuumadda Mooshin laga keeno ay xaq u leedahay in ay is difaacdo islamarkna xubnaha baarlamaanka ay tahay in fursad loo siiyo ka doodida mooshinka ka dib na cod loo qaado.
” Haddii mooshin laga keeno oo tirada xildhibaanada loo baahan yahay ay ka keenaan waa maxkamad oo kale cod baa loo qaadayaa islamarkana intaan codka loo qaadin xukuumadda waxaa fursad loo siinayaa inay is difaacdo oo wixii lagu eedeeyay ay ka jawaabto, ” ayuu yiri Abukaate Cali.
Abukaate Cali Maxamed Ciid ayaa sheegay in kalsooni kala noqoshadii Sabtidii baarlamaanka ka dhacday aan loo marin waddada sharciga ah.
Waxaa uu intaa ku daray in kalsooni kala noqoshada ay ahayd in al shaaciyo oo la wada ogaado.
” Marka dowlad la joogo wax la kala qarsanayo ma laha, xukuumadda haddii ay ku fashilanto inay shaqadeedii waddo waa la naadinayaa oo xukuumadda way fashilantay ayaa la dhahayaa oo intaasi oo baarlamaan ah ayaa mooshin keenay , ” ayuu intaa ku daray.
Abukaate Cali Maxamed Ciid ayaa farta ku fiiqay in ay tahay in baarlamaanka al horkeeno qodobada ay xukuumadda ku xadgudubtay islamarkana haddii lagu helo eedeeynta markaas codka loo qaado.
“Wa in la dhahaa intaasi oo xildhibaan ayaa mooshin keenay intaasoo qodob ayay ku xadgudubtay, haddii ay ka jawaabi karto ha is difaacdo, maalin heblo ayaa al imaanayaa baarlamaanka, xukuumadu waa in ay is difaacdaa, waa in baarlamaanka looga gar helaa inaysan waxba qaban markaas gacan la taagaa , ” ayuu yiri abokaate Cali